Amapulatifomu edijithali ezezimali: ayini futhi asebenza kanjani? | Ezezimali Zomnotho
Eminyakeni yakamuva, amapulatifomu ezezimali edijithali abe semfashini njengeziteshi zokuthuthukisa ukutshalwa kwezimali. Kepha akukona imisebenzi ejwayelekile, kodwa ngochungechunge lwemikhiqizo esuselwa kumasheya enza ubungozi obukhulu ekusebenzeni. Lokho wukuthi, lapho ungathola khona imali eningi ngesikhathi esincane, kepha futhi ushiye cishe yonke inhlokodolobha endleleni. Kungakho ukuhlakanipha kuzoba yisici esivamile kuzo zonke izenzo zabatshalizimali abakhetha lokhu kutshalwa kwezimali okukhetheke kakhulu.
Ama-CFD amathuluzi ayinkimbinkimbi futhi anengozi enkulu yokulahlekelwa yimali ngokushesha ngenxa yokusebenzisa amandla. Ama-akhawunti wabatshali zimali abangama-66.77% alahlekelwa yimali lapho ethengisa ama-CFD. Kufanele ucabangele uma ngabe uyaqonda isebenza kanjani ama-CFD Futhi uma ukwazi ukukhokhela ukuthatha ingozi ephezulu yokulahlekelwa yimali yakho. Izinsizakalo zokukopisha amakhophi zinobungozi obengeziwe ekutshalweni kwakho ngenxa yemikhiqizo enjalo. Uma izingozi ezihilelekile zingabonakali kahle kuwe, kuzoba ngcono kakhulu ukunikela ngale ndlela enobudlova yokutshala imali.
Lesi sigaba semikhiqizo yezimali senziwe ngezinhlelo ezimbili zokwenza. Ngakolunye uhlangothi, ukwanelisa utshalomali olulula lwesikhashana oludalelwe labo zimali abafuna indlela esheshayo yokufeza izinhloso zabo futhi okungekho okunye ngaphandle kwalokho ngokushesha kuzuzwe inzuzo enkulu ekuhambeni kwabo ezimakethe zezimali. Ngakolunye uhlangothi, ngokusebenzisa izinkundla zabachwepheshe ezimakethe zezezimali. Lapho umnikelo wabo omkhulu ulele ekutheni bangasiza ukukopisha ukuthengiselana futhi balawule ngokuphelele zonke izingcuphe ezingaba khona.
1 Amapulatifomu edijithali: bhalisa
2 Yenza imali
3 Ama-Investment opharetha aqinisekisa
4 Izinhlelo zebhonasi
5 Amathiphu wokwakha ukwethembeka kulezi zinhlelo
6 Uhlelo lokuhoxa oluzenzakalelayo
Amapulatifomu edijithali: bhalisa
Ukuze uqale ukuhweba emakethe yokushintshaniswa kwamanye amazwe noma ezinye izimpahla zezezimali, kuyadingeka ukuthi ubhalise endaweni yelungu bese uvula i-akhawunti yokuhweba. Okwe abathengisi abaqalayo, i-akhawunti ebizwa nge-demo iyatholakala. Kusho ukuthini lokhu? Yebo, ilula kakhulu, indlela yokufunda njengomtshalizimali kepha ngemali ebonakalayo ngaphandle kwengozi yokulahlekelwa yimali yangempela. Awudingi ukwenza noma yikuphi ukutshalwa kwezimali okuphawulekayo.
Isinyathelo esilandelayo ukulanda nokufaka ipulatifomu yokuhweba. Ukuthenga nokuthengisa imali noma eminye imikhiqizo yezezimali, kufanele ulande leplatifomu bese uyifaka kukhompyutha yakho noma kwenye ithuluzi lobuchwepheshe emizuzwini embalwa ukuqala ukusebenza emakethe yezezimali ekhethiwe. Kunoma ikuphi, ukukusiza ufunde ukuthi ungabikezela kanjani ukuhamba kwamabhangqa emali, lezi zingxenyekazi zedijithali zinikela ngengcebo yezinto zokufunda nezereferensi.
Esinye isigaba kule nqubo yokutshala imali senzeka ngokusebenza kwemali yangempela. Ngalo mqondo, ukuqala ukuhweba ngemali yangempela, udinga ukufaka i-akhawunti yakho yokuhweba. Kungenziwa esigabeni esinegama elithi Idiphozithi noma Ukuhoxa, kuya ngokuthi kuzoba yini ukunyakaza kwabasebenzisi ngaphakathi kwendawo yelungu. Ungafaka i-akhawunti yakho yokuhweba usebenzisa noma yiluphi uhlelo lokukhokha olutholakalayo, oluhle kakhulu kuwe. Lapho kutholakala khona okwaziwa kakhulu, kusuka ekudlulisweni kwebhange kuya ekusetshenzisweni kwamakhadi wesikweletu noma asebhange.
Isinyathelo esilandelayo sincike ekwenzeni ukuthengiselana kungxenyekazi yedijithali. Ungavula kuphi i-oda elisha, kufanele ucacise ivolumu (Kunconywa ukuqala ngobuncane obungu-0.01) bese ukhetha phakathi kokuthengisa nokuthenga. Ngemuva kwale nqubo, i-oda lakho selivuliwe, okusho ukuthi usuqalile ukuhweba emakethe oyikhethile nokuthi kungaba ezinye zeziningi ezinabaphathi bezezimali. Lapho ezinyangeni ezisanda kwedlula kufakwe eyodwa entsha njengaleyo exhunywe kwizimali ezibonakalayo, lapho kukhona khona i-bitcoin.
Ama-Investment opharetha aqinisekisa
Lezi zingxenyekazi ezikhetheke kakhulu, zizonke, zingamalungu eSikhwama Sokunxeshezelwa Kwezimali sezwe elithile elingaconsi phansi. Inhloso yalesi sikhwama ukuhlinzeka amakhasimende anemishwalense ezinkampanini ezibhalisiwe ngezinkokhelo zesinxephezelo uma izinkampani zingakwazi ukuzikhokhela zodwa. Kulezi zimo, isinxephezelo singaba nenani kufika kuma-euro angu-20.000.
Inani eliphansi lediphozi lokuqala lama-akhawunti akhululwe yizingxenyekazi zokutshala imali ngedijithali yi-100 USD / 100 EUR / 100 GBP (noma ilingana nanoma iyiphi enye imali). I- idiphozi elincane kuma-akhawunti akhethekile kungama-5,000 USD. Akukho ukulinganiselwa kokufakwa okulandelayo. Kodwa-ke, kuyadingeka ukwaziswa ukuthi ubungozi bale misebenzi bukhulu kakhulu ngakho-ke akukhuthazwa ukwenza ukunyakaza okukhulu ngoba ingxenye enhle yemali etshaliwe ingalahleka.
Esinye isici okufanele sigqanyiswe kusuka manje kuqhubeke ukuthi le yisevisi enokuvikelwa okulinganiselwe kwe-akhawunti. Lokhu kusebenza kusho ukuthi kusukela kulo mzuzu oqondile, bonke abatshalizimali abancane nabaphakathi baqinisekisiwe ngokuvikelwa okungalingani. Ngalo mqondo, ukuvikelwa kokulinganisela okungalungile kuqinisekisa ukuthi umtshali-zimali akakwazi ulahlekelwe yimali eningi lowo onayo ku-akhawunti yakho. Akumangalisi ukuthi ngemuva kwakho konke kungenye yezingozi ezinkulu zale misebenzi. Ngaphezulu kokunye ukucatshangelwa kobuchwepheshe futhi kusukela lapho kubhekiswa khona kokuqukethwe kwayo.
Ngakolunye uhlangothi, lezi zingxenyekazi zokutshala imali zedijithali zifake uhlelo lwezibopho ukwenza imisebenzi ezimpahleni zezimali inikwe amandla esimweni ngasinye kube nenzuzo ethe xaxa. Ngokuqondile, imvamisa banikeza amaklayenti abo okunikezwayo okungcono kakhulu kokuphromotha ezimakethe zezezimali: ivawusha yakudala, ivawusha yokuxoxisana noma ukubuyiselwa imali. Ngeziphakamiso ezithwala izaphulelo ezifika kwezingu-10% kubhalansi ye-akhawunti. Ngenkathi kuphambene, ezinye zenzelwe okungcono kakhulu
Amathiphu wokwakha ukwethembeka kulezi zinhlelo
Kunochungechunge lwezincomo ukuze abatshalizimali abancane nabaphakathi bakwazi ukwandisa ukunyakaza kwabo emafeni wezezimali akhethiwe futhi abalandele ezinye izeluleko esikuvezela zona ngezansi:
Ngaphansi kohlelo, iklayenti linethuba loku khipha imali kusuka endaweni yelungu lakho kabili ngenyanga ngaphandle kokukhokha amakhomishini.
Ikhasimende lingasebenzisa lolu hlelo ngoLwesibili wokuqala nolwesithathu lwenyanga ngayinye yekhalenda, usuku lonke.
Ngezinsuku zesonto elishiwo ngenhla, iklayenti lingakhipha imali ngaphandle kwekhomishini nganoma yiluphi uhlelo lokukhokha olutholakala kanye kuphela ngosuku.
Ukuze uzuze kulokhu okunikezwayo, iklayenti kufanele lifake i-akhawunti yalo yokuhweba okungenani kanye ezinyangeni eziyisithupha ezedlule.
Ukukhetha kwe ukuhoxiswa kwamahhala ngoba ikhomishini yokusebenzisana ilinganiselwe.
Ngakolunye uhlangothi, bacabanga ezinye izinhlelo lapho abasebenzisi bangazuza khona ezimweni zenkontileka abazinikezayo. Isibonelo, ngemisebenzi enesilinganiso namaphesenti wemajini (kuma-50% wemikhawulo encane edingekayo) lapho umhlinzeki edingeka khona ukuvala indawo eyodwa noma eziningi ezivulekile zama-CFD noma eminye imikhiqizo enezici ezifanayo.
Uhlelo lokuhoxa oluzenzakalelayo
Ngakolunye uhlangothi, kufanele kuphawulwe ukuthi uhlelo lokukhipha imali oluzenzakalelayo luyisevisi yokucubungula okuzenzakalelayo kwezicelo zokuhoxiswa kwemali ezivumela ukunciphisa isikhathi sokudlulisa yezimali kuze kufike kumzuzu owodwa. Izicelo azisacubungulwa kuphela ngesikhathi sebhizinisi lenkampani, kepha nasebusuku, ngezimpelasonto noma ngamaholide.
Amaphesenti ezicelo acutshunguliwe ngokuzenzakalela ikhula kancane. Ngalesi sikhathi, i-85% yezicelo zamakhasimende zicutshungulwa ngale ndlela ezenzakalelayo. Lapho isikhathi sokucubungula isicelo singaphansi kweminithi elilodwa. Komunye umthambo, ukuhoxiswa kwezimali kunezigaba ezi-2: ukwelashwa kwesicelo sokuhoxa nokwenza isicelo. Ukuzenzekelayo le nqubo kusheshisa kakhulu ijubane lokukhipha izimali.
Ukusebenza kwesistimu kuyatholakala
Lolu hlelo lusebenza amahora angama-24 ngosuku, izinsuku eziyi-7 ngesonto. Wonke amaklayenti angakhipha izimali zawo nganoma yisiphi isikhathi, ngisho nasebusuku, ngempelasonto noma ngeholide lomphakathi.
Uhlelo lokuhoxa ilula futhi yonke indawo. Futhi le ndlela yokuzikhipha ezenzakalelayo iyatholakala kuzo zonke izinhlobo zama-akhawunti wangempela lapho kwenziwa khona imali kusetshenziswa noma yiziphi izinhlelo zokukhokha ezilandelayo: I-Skrill (Moneybookers), FasaPay, NETELLER. Kufanele nje wenze isicelo sokuhoxa endaweni yamalungu akho.
Mayelana neminye imisebenzi, leyo ehlose ukudlulisa izimali phakathi kwama-akhawunti abo okuhweba kuzingxenyekazi ezahlukahlukene zokutshala imali kwidijithali ivelele. Ngalo mqondo, kufanele kuqashelwe ukuthi ungadlulisela imali kwi-akhawunti, efakwe ngekhadi lasebhange, kungakadluli izinsuku ezingama-30 ngemuva kosuku lokufakwa kwemali. Ukuqedela ukudluliswa kwangaphakathi: iphasiwedi ye-akhawunti yakho, inani elizodluliswa kanye nenombolo ye-akhawunti oya kuyo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Amapulatifomu edijithali ezezimali: ayini futhi asebenza kanjani?